SONATA-CANTATA: အတ္တရုပ်ကြွင်းအား တူးဆွခြင်း
အတ္တတွေကြားမှာ မိန်းမောမျောလွင့်ပြီး အနတ္တတွေမေ့လျော့နေတဲ့ ကျွန်မတို့ လို ငါတွေကို သတိပေးတဲ့ တန်ဖိုးရှိလွန်းတဲ့ ကဗျာတပုဒ်အတွက် ကျေးဇူးပါဆရာ…
btw i've read your new post. v good. but i dare not comment to saya. hehe
actually, we are finding everything but i can't find ourself.
ရူးသွပ်နေသူ တစ်ဦးသာဖြစ်တယ်။” မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သလို “လူတိုင်းဟာအရူး”
ဆိုတဲ့တရားသဘောလေးကို လူတိုင်းနားလည်ထားရင်ကောင်းမယ်မသီတာ။ ကိုယ်သာအ
ကောင်း သူများကတော့အရူးလို့ ထင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့။
အဟမ်း.. အဟမ်း.. မယုဝရီ
အတ္တတွေကို တူးဆွနေတာ သူ (အတ္တ အတုံးအခဲကြီး - ကိုဧရာ) မသီတာ မဟုတ်ဘူး။
အချင်းချင်းမို့ ပြောပြတာ မသီတာက shadow ပဲလုပ်တာ။ နှစ်ယောက်, ပေါင်းစားနေတာ ကြာပြီ
တန်ခူး, tg, နဲ့ ဆောင်းရေ ကိုဧရာက ကျေးဇူးပါတဲ့
အဲ့ဒါသာကြည့် shadow ကဘဲ ရှဲရှဲ လုပ်ရတယ်။
ဒီကဗျာကို လာလာဖတ်ကြည့်နေတာ ကြာပြီ။ တစုံတခုကို နားလည်သွားသလိုလို။ နားရှုပ်သွားသလိုလို။ မအူမလည် နဲ့ ပြန်သွားရပေါင်း မနည်းတော့ဘူး။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် တခါတလေ စဉ်းစားမိတာနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေသလိုလိုလည်း ရှိတယ်။
လောကကြီးဟာ တကယ်ဘဲ ကိုယ်မြင်တဲ့အတိုင်း တကယ်တည်ရှိနေတာလား။ တကယ်တည်ရှိနေတာကိုဘဲ ငါက မြင်တဲ့အခါ ငါထင်ချင်သလို ထင်ပစ်လိုက်တာလား။
ငါကရော ငါ့ဟာငါ ဘာလို့ ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်း ဟုတ်လို့လား။
ပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို ချောင်းကြည့်တဲ့အနေနဲ့ သုံးသပ်ရမှာလား။ ပြူတင်းပေါက်အပြင်ကနေ အထဲကို ချောင်းကြည့်တဲ့အနေနဲ့ သုံးသပ်ရမှာလား။ အထဲရောအပြင်ရော မြင်ရတဲ့ တနေရာရာက ကြည့်ရမှာလား။
စဉ်းစားလို့မရ။ ပဟေဠိကို အဖြေညှိပါဟေ လို့ သီချင်းသာ ထဟစ်လိုက်ချင်မိတယ်။
ကိုဧရာသို့……..စာတမ်းလေးကို ပြီးအောင်ရေးပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အရူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ “နောင်” ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်၊ အလျဉ်းသင့်လို့ အမှတ်တရ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုပေါရေ… ငယ်ငယ်က သိပ်ကြိုက်တဲ့ စကားတစ်ခုရှိတယ်။ “ရှင်းနေရင် ရှုတ်အောင်လုပ်။ ပြီးမှ ပြန်ရှင်း…။ ဒါဆို ပိုရှင်းသွားရော” တဲ့။ “ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျာဉ်မှူး” ဇာတ်ကားထဲ မှာ B.Ed. အောင်သိုက် ပြောတဲ့ စကားလို့ထင်တာပဲ။ တကယ် ရှင်းတာမဟုတ်ပဲ… အရှုတ်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုထားတာနဲ့ စာရင်၊ ရှုပ်နေတာဟာ ရှင်းဖို့ ပိုနီးလာပြီလို့ ခံယူထားပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်လည်း အရှုပ်ထဲမှာပဲ ရှိနေသေးလို့ ရေးဖို့ လက်တွန့်နေတာပါ။ ဖြစ်တည်မှုဝါဒ အပါအ၀င် အနောက်တိုင်းဒဿနသမိုင်းက အတ္တ အယူအဆတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်ကနေ comparative study သဘောမျိုး ရေးဖို့ပါ။ ရေးဖြစ်ရင် လက်တို့ လိုက်ပါမယ်။
ကိုပေါရဲ့ comment နဲ့ ဝေမျှတဲ့ ကဗျာအတွက် ကျေးဇူးပါ။